10 music redio ngwa ọdịnala n'ihi iOS na Android
Anyị niile nwere onwe anyị listi ọkpụkpọ na music tracks nke anyị hụrụ n'anya na-ege ntị na-enwe anyị ọnọdụ uche mmadụ. E nwere ngwa ọdịnala na saịtị dị ka Ganna.com, Spotify wdg ebe ị pụrụ ịchọta music on ina ma mgbe ụfọdụ, e nwere ihe agụụ na-adọta gị ntị na redio. Ị nwere ike ịchọta ọhụrụ na ọhụrụ songs i nwere ike na-amaghị banyere, na-eso dị iche iche Genres na-enwe ndị ọzọ stof. A bụ ndepụta redio ngwa na ga-eme ka ị na-ada na ịhụnanya na redio, fun bụ azụ, ihe niile ọ chọrọ a aka.
Part 1. TuneIn redio
Part2. FM redio India
Ọ bụrụ na ị hụrụ n'anya na-ege ntị FM redio, na-eso na-egosi na ozi ọma na njikere inweta ohere nile mba ụgbọ na mpaghara netwọk, dị nnọọ enweta na TuneIn Radio App na akara ngosi na-ahụ onwe gị dị iche ụwa.
• ihe karịrị otu nde ndị ụgbọ okporo ígwè site na egwuregwu, music, okwu na ozi ọma na otu ebe
• Isi si gburugburu ụwa
• Jikọọ na ndị enyi na-akpakọ
• Jikwaa gị ọkacha mmasị rụọ ọrụ nke ọma
• Nga buffering ikpeazụ ụzọ kwa ogologo
• Arọ batrị ojiji
• Unfixed glitches ma eleghị anya a mmechuihu
2. FM redio India
Nke a bụ a 'Mere na India' ngwa n'ihi na ndị hụrụ ya n'anya Indian music. Na-ege ntị Indian redio ụgbọ n'ebe ọ bụla n'oge ọ bụla nọ ọdụ gị n'ihe ndina.
• Stations si n'asụsụ niile-adọrọ mmasị categorized
• Ndenye navigation igodo popup na ngosi panel na-ekwe ka multitasking
• Ogo nke ụgbọ na ezi
• Arọ data ojiji
• Nhọrọ agụ download, ma apụghị ige ntị tracks offline
• Buffering ewe nnọọ ogologo on 2G netwọk
iHeart nwere mma collection nke omenala ụgbọ nke adreesị iche iche Genres na artists. I nwere ike mgbe ahụ a ojii iji kwado gị ọnọdụ. E nwere ihe karịrị 18 nde songs n'elu netwọk, abịa tinyere na na bụ a ngwugwu nke egwuregwu, azụmahịa na ntụrụndụ netwọk.
• Chọpụta omenala na redio ụgbọ iji kwado gị Genres
• nnukwu backend nke mgbe agwụcha music track anatara.
• Ò Kwekọrọ n'Ozizi ka ọtụtụ ngwa ngwaọrụ.
• Unfixed chinchi nwere ike iwe
• Ụfọdụ inbuilt zuo arịrịọ pụrụ ịbụ a mmasị
• Ụfọdụ ọwa ịgbawa ugboro ugboro
Ya ihe-ya nile ngwa n'ihi na songs. Kpọọrọ na Editor nhọrọ na Play Store nwere n'elu 5 nde downloads na a 4.4 fim
• Curated listi ọkpụkpọ dị ka kwa genre, ọnọdụ uche na ntụpọ.
• Zọpụta ndị gị playlist na-eso ndị enyi
• Ebighị song tracks
• Omuma collection nke songs
• Mgbasa ozi esighi na-eme ka ahụmahụ weird
• Ụfọdụ tracks bụ ugboro ugboro
• Enwereghị ndakọrịta na ụfọdụ ngwaọrụ
Jango Radio bụ ihe dị egwu ahaziri redio ọrụ e mere na-egwu egwu ị hụrụ n'anya. E abụọ specialties nke a redio ngwa, ahaziri ụgbọ site na nnukwu collection ma ọ bụ na akpaaka na-atụ aro ụgbọ na n'ezie oyi tracks.
• Mepụta gị omenala na redio ụgbọ si artists nke gị nhọrọ
• Họrọ si ọtụtụ nke Genres na ugboro
• Enwe n'elu gosiri playlist.
nke a oyi ngwa weaved maka ndị chọrọ ka ịbịakwasị onwe ha n'ime ụwa nke ndị na music, a music na-akọwa ọ bụla na ọnọdụ na ọrụ. Ị nwere ike ịchọta music na dabara ọ bụla ebe ma ọ bụ ọrụ.
• Mgbasa ozi esighi na free interface bụ a-aga na-aga
• Youtube na SoundCloud mwekota
• Low ugboro ugboro ọnụego
• Mara mma ọhụrụ anya mee ka ọ expectionally jụụ
• High data ojiji
• freezes na mkpọka mgbe ụfọdụ
• Ụfọdụ unfixed chinchi
Ọ bụ 365 ụbọchị ntụrụndụ na ngwa na-nwere ike mgbe ka ala. Na n'elu 260 Genres dị ka Bad, Jazz, mba, nkume na ọtụtụ ndị ọzọ .... The anatara mgbe mechie, ma gị search maka kasị mma ngwa mechie.
• Ọ dịghị mgbasa ozi ka ịkwụsịtụ
• Nanị desktọọpụ ngwa
• Unlimited music listi ọkpụkpọ
• Personalised anatara
• mkpọka ugboro ugboro n'ihi na ụfọdụ ngwaọrụ
• Ọ dịghị aba-akwado site na ụfọdụ netwọk, nke nwere ike ịbụ a ndakpọ olileanya n'ihi na ụfọdụ na-ege ntị.
Music ọkọkpọhi effortless na Pandora. Enweta na-abanye na wonderland nke music. Ị nwere ike ịhụ ihe ọ bụla egwu, ọgụ egwu ma ọ genre na dị nnọọ a pịa.
• User-enyi na enyi interface
• Awesome àgwà playback
• Easy ịchọ
• gbasara mkpokọta Sọl nnukwu ị ga-adịkarịghị laghachi mbụ track
•-ewe ogologo oge iji echekwa songs
• mkpọka ugboro ugboro
• Ọ bụghị dakọtara maka ọtụtụ ngwaọrụ
ọ bụ a kpochapụwo ngwa na-ege ntị internet dabeere redio. Ọrụ ike na-enwe oge ha na-ege ntị music ụgbọ, ozi ọma na-egosi, na dị iche iche ndị ọzọ omume.
• ota on ndabere nke mpaghara
• ọtụtụ asụsụ nchekwa data
• Share listi ọkpụkpọ na ndị enyi
• Nhọrọ nke ụgbọ ike ụda ị na-amaghị
• na-aṅaghị enuba ụfọdụ ụgbọ
Touch-awụ ọsọ n'ugwu bụ a n'ime obodo jukebox na-ahapụ gị chọọ songs si Ogwe na ụlọ oriri na ọṅụṅụ na mpaghara nke USA na Canada.
• Tulee listi ọkpụkpọ na ọha Hangout ebe
• Mepụta na mmekọrịta gị na listi ọkpụkpọ
• ejedebeghị na ụfọdụ ebe naanị
Listen ọkacha mmasị gị music. Dị nnọọ download ọkacha mmasị gị Radio na ngwa na-enuba ọkacha mmasị gị redio - na ọ bụ dị mfe dị ka na.
> Resource> iOS> Top 10 Music Radio ngwa ọdịnala n'ihi iOS na Android